USchoeman uzimisele ngampela ngesikhundla sobungqongqoshe
August 4, 2021 August 4, 2021 Impempe.com
URoland Schoeman, owayengumbhukudi ophambili kuleli, usebhalele umengameli wezwe, uCyril Ramaphosa ecela ukuqokelwa esikhundleni sobungqongqoshe.
USchoeman ufuna ukuba ngungqongqoshe wezemidlalo kuleli. Ngesikhathi ememezela lesi sifiso sakhe okokuqala kwiTwitter ngeMpelasonto, abaningi bakuthathe ngokuthi uyazidlalela nje.
Nokho usukile umsindo futhi abanye bembuza ngazokwenza kangcono. Abanye bamkhumbuze ukuthi uma engelona ilungu leqembu elibusayo uyogcina ngakho ukuphupha emini.
Kube sekuvela nezinsolo zokucwasa ngokwebala ake wabhekana nazo ngesikhathi eyobhukuda e-India eminyakeni edlule.
Kule midlalo ayekuyo wabiza omunye wezibukeli ngenkawu ethi ubabangela umsindo. Wacashunwa ezivikela kulokho ngokuthi kwakungekona ukucwasa kodwa vele izinkawu zaziwa ngokubanga umsindo.
Abanye bambuze ngokuthi uzomisa kanjani odabeni olubucayi lwezoguquko kwezemidlalo kuleli oluhamba ngonyawo lonwabu.
Izimpendulo zakhe zibachazile abanye kanti kwabanye ubezifanela nabo bonke ozopolitiki nje abakwazi ukuzikhulumela kodwa uma sekumele kwenziwe dololo.
NgoLwesibili ebusuku uphinde wabuya kwiTwitter esezobika ukuthi usebhale incwadi yokucela lo msebenzi kumengameli wezwe uRamaphosa.
Kule ncwadi yakhe uveze isifiso sakhe wabe eseklelisa nasekuzuzile kwezemidlalo neziqu zakhe zemfundo ukukhombisa ukuthi uyakwazi okudingekayo kulo msebenzi.
“Ngokubona kwami ngokuzithoba nje, sidinga ongqongqoshe abawulungele umsebenzi abawunikwayo. Ukuba nesipiliyoni emsebenzini abawunikwayo kungasiza,” kubhala uSchoeman kule ncwadi.
“Mengameli, ngiyazi ukuthi yini edingekayo ukuze ube ngumsubathi ophumelelayo. Sesiside isikhathi ipolitiki nemigomo yayo ingcolisa ezemidlalo ngendlela yokuthi ezinye izinhlangano zezemidlalo ziyadunguzela kumanje.
“ICricket South Africa ne-Athletics South Africa yizona izibonelo ezisheshe zifike engqondweni zalokhu. Sidinga ungqongqoshe wezemidlalo ogxile ekusizeni izingane ezisencane ukuba ziphumelele emazingeni amazwe ngamazwe.
FUNDA NALA: USekgota akafuni ukudidiswa yinjabulo yomdlalo wokuqala kwiChiefs
“Asidingi (ungqongqoshe) ozogxila ezimpini zangaphakathi ezinhlanganweni zezemidlalo namaqembu. Nginesiqiniseko ukuthi sifuna ukuwina siyisizwe.
“Mengameli, ngimuntu waseNingizimu Afrika osebonile ukuthi ezemidlalo zingayishintsha kanjani impilo zivule namathuba,” kusho yena kule ncwadi.
Ucele ukuthi njengoba kulindeleke ahlele kabusha ikhabhinethi yakhe uRamnaphosa, angamkhohlwa ngoba uzimisele ukusebenzela isizwe.
Previous Previous post: USekgota akafuni ukudidiswa yinjabulo ngomdlalo wokuqala kwiChiefs
Next Next post: Ungqongqoshe uyifuna la indebe emaqenjini aKwaZulu-Natal